Iskudhafka Jarmalka Adhijirka Rottweiler: Macluumaadka Taranka, Xaqiiqda & Sawirada - Taranka
Iskudhafka Jarmalka Adhijirka Rottweiler: Macluumaadka Taranka, Xaqiiqda & Sawirada
Ilaa iyo inta eyda isku dhafan ay ka walwalsan yihiin, Iskuduwaha Jarmalka Shepherd Rottweiler waa mid gaar ah maadaama aadan ka heli karin nooc isku dhafan oo leh laba waalid oo waalid ah oo sidaas u eg.
Labada nooc ee waalidku waa ka soo jeeda dhaxalka Jarmalka , si aad u adag oo daacad ah.
Natiijadu waa eey aan fiicnayn, kaas oo marka la dhexgalo oo la tababaro laga bilaabo da 'yar, uu yahay wehel deggan, deggan oo dabeecad wanaagsan.
Wuxuu ku faanaa guryo khibrad u leh milkiileyaal waaweyn, kuwaas oo si buuxda u fahamsan waxa ay naftooda u ogolaanayaan.
Hoos ka akhriso si aad u aragto haddii aad heshay waxa ay u baahan tahay si loo daboolo baahiyaha canaankan weyn ee xoogga badan.
Shepherd Rottweiler Isku-darka Jarmalka
Cabir 22-27 ″ oo dherer ah oo labkuna inta badan waa ka dheer yihiin
Miisaanka 75 - 115lb tanina waxay inta badan kuxirantahay cabirka waalidiinta
Nolosha qofka 10 - 13 sano
Ku Haboon Qoysaska leh khibrad leh noocyo waaweyn oo awood badan
Kala duwanaanta Midabka Madow, Madoow iyo Tan, bunni
Dabeecad Xoog, daacad ah, caqli badan, kalgacal iyo firfircoon
Magacyo Kale Shottie, Rottie Shepherd, Adhijir qudhmay, Shepweiler
Shepherd Rottweiler Mix Jarmalka - Dulmarka Guud
Macluumaadka Adhijirka Jarmalka
Jarmalka Shepherd Rottweiler Mix Ey
Shepherd Rottweiler isku dhafka ah ee Jarmalka
Sida Loo Daryeelo Iskuxirka Rolfweiler ee Jarmalka
Layli Adhi ah
Sida Loo Tabobaro Isku Darka Rolfweiler ee Jarmalka
Soo Koobida Taranka
German Shepherd Rottweiler Dog waa 50% Shepherd Jarmal ah iyo 50% Rottweiler.
Hadaad raadinayso a eey caqli badan oo xoog leh , yaa daacada ah oo kalgacal leh, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso meel dheer.
Ahaanshaha iskudhaf, iskudhafka Jarmalka Shepherd Rottweiler ma aqoonsana Naadiyo Kennel ah. Si kastaba ha noqotee waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin Adhijirka Rottie ee Diiwaanka Taranka Noolaha.
Eygan waxaa loo soo saaray sidii eey wehel ah, iyo sidoo kale nashqadeeyaha nooc kasta , rajadu waa in la-soo-saaro tayada iyo astaamaha wanaagsan iyo ka-soo-baxa tayada xun iyo arrimaha caafimaadka.
Si ay nooga caawiso inaan fahanno waxa ay taasi la micno tahay, aan eegno taranka waalidka.
In kasta oo ay shaqada militariga iyo booliska , Adhijirka Jarmalka asal ahaan ka soo jeeda adhiga Jarmalka . Waxaa loo soo saaray sirdoon, xoog, kacsanaan, dhuumasho iyo hawo guud oo maamul.
Caannimada Jarmalka Shepherd-ka ayaa ku soo kordhay Mareykanka horraantii 1900-meeyadii, taas oo inta badan ay ugu mahadcelisay dhiirrigelinta 'Strongheart', iyo noocyadan ayaa markii dambe loo tallaalay iskutallaab si loo soo saaro noocyo badan oo isku dhafan:
Shepherd Jarmal Pitbull Mix
Isku-darka Shepherd Lab Jarmal
Adhijirka reer Jarmal ee Husky Mix
Nasiib darrose, wax yar ka dib markii ay caan baxeen, waxaa yimid Dagaalkii oo caannimadoodii hoos ayey u dhacday iyadoo ay ugu wacan tahay ururka Jarmalka. Magaca ka dib Alsatian Mareykan ah, iyo soo noqoshadeedii xigta, Adhijirka Jarmalka ayaa mar kale la jecel yahay, adduunka oo dhan, isagoo ah eeyga labaad ee ugu caansan Mareykanka.
Waa shaqaale aad u jecel, oo lagu ixtiraamo caqligooda iyo tababaranimadooda.
Inta badan sida Adhijirka Jarmalka, Rottie waxaa loogu jecel yahay sirdoonkeeda iyo tababbarkeeda sidoo kale; shaqaale kale oo dhakhso leh
Asal ahaan waxay ka soo jeedaan Jarmalka, waxay ahaayeen eeyo xoog badan oo wax baadha. Xirfadooda xoolo dhaqso ah waxay kudhamaadeen markii ay soo ifbaxeen gawaarida lo'da ee tareenka, laakiin kala duwanaantooda ayaa la xusay Ilaa horaantii 1900-yadii, Rotties waxay ahaayeen shaqaale adag; u hago eyda indhoolayaasha, ilaaliyayaasha, eeyaha ilaalinta iyo dhawaanahan baadi goobka iyo samatabbixinta eeyaha musiibooyin badan.
Waxay leeyihiin xitaa ka dhigtay sida eeyaha daaweynta .
Labaduba Adhijirka Jarmalka iyo Rottweiler ayaa leh sumcad xumo gardarro , laakiin, badankood ayaa seegay halkaan. Labada noocba waa kuwo la carbin karo oo waxay sameyn doonaan wax kasta oo aad ka codsato; waa sababta booliska iyo militariga iyaga oo kale ah, waxay u muujin karaan gardarro amarka ku saabsan.
Erey wanaagsan oo bulsheed, oo si wanaagsan loo tababaray, Jarmalka Shepherd ama Rottweiler wuxuu noqon karaa eyga ugu naxariista badan uguna dabacsan.
Waa inaad rajeyneysaa inaad bixiso illaa $ 850 oo loogu talagalay Jarmalka Shepherd x Rottweiler Mix
Markaad raadineysid Shepherd Jarmal x Rottweiler Mix Puppy, ilaha sumacad caan ah . Mid ka mid ah kubbadahaas qulqulaya waxaad filan kartaa inaad bixiso meel kasta oo u dhexeysa $ 250 - $ 850 USD.
Qiimuhu wuxuu si weyn uga tarjumayaa taariikhda waalidka (yacni abtirsiinkiisa) iyo nooca taranka.
Sababtoo ah iskumid ahaanta waalidiinta, sheyga iyo biyo xireenka (yacni hooyo iyo aabbe) way is beddeli karaan cabbirka qashinkuna waa isku celcelis, ilaa 8 eey.
Inta badan eeyaha 'Shepherd x Rottweiler' waxay yeelan doonaan dhego jilicsan.
Haddii ay ka dhaxleen Adhijir ka badan Rottweiler, waxaad u arki kartaa inay noqdaan dad tilmaamaya markay weynaanayaan, qaar xitaa midkood ayaa ka soo baxa ka hor kan kale - inta badan milkiilayaasha Shepherd ayaa xusuusan doona xilligaas noloshooda eyga.
Maaddaama loo kala saaray inay yihiin nooc dhexdhexaad ah, isku darkaaga ayaa si buuxda u qaan gaari doona inta udhaxeysa 18 bilood ilaa 2 sano.
Milkiilayaasha waaweyn ee khibrada leh, isku dhafkan ayaa ah mid adag oo loolan adag sababtoo ah dabeecadooda daacadnimo iyo kalgacal leh.
Iyada oo labada waalidba ay isku egyihiin dabeecadda, hubaal way ahaan doonaan leeyihiin shakhsiyad adag , laakiin xusuusnow, maadaama ay tahay iskudhaf, waligaa ma noqon kartid 100% hubaal sifooyinka ama astaamaha eygaagu ka dhaxli doono, sidaa darteed milkiilayaasha la qabsan kara waa waajib.
Guud ahaan, goorta laga helayo abuure sumcad leh, iyo bixinta waxay leeyihiin hore iyo socoshada bulshada iyo tababarka, isku darka adhijirka Jarmalka ee Rottweiler waa mid caqli badan, firfircoon, daacad ah oo kalgacal leh.
Waxay ku habboon yihiin qoysaska oo dhan, iyagoo siinaya khibrad eyda caqliga badan iyo kuwa adag.
Isku-dhafkan noqon kara dhul , laakiin, waxba tababarka qaar diirada la saaray ma xamili karaan.
Waxaad ogaan kartaa in mararka qaar ay yihiin kuwo aan fogeyn, laakiin, tani waxay ka tarjumaysaa kaalintooda taariikhiga ah sida eey waardiye ah .
Markii lala barbar kiciyo iyaga, eeygan cufan ee isku dhafan ayaa u dulqaadanaya dadka kale oo dhan: carruurta, dadka waaweyn iyo xayawaanka guriga jooga. Bangiga ha dhigin dhogor kasta oo yar oo ku badbaadaya beertaada in kastoo; dabagaalladaasi waxay khatar weyn ku yihiin amniga guriga!
Khadadka shaqadoodu waxay ka dhigan tahay inay aad u sarreeyaan tamar ahaan, si kastaba ha noqotee, markii ay garaacaan qoondadooda maalinlaha ah ee jimicsiga iyo kicinta, ma jecla wax ka badan nasashada ... labada waalidba waxay caan ku yihiin jilitaanno doqonimo ah, sidaas darteed isku dhafkan wuxuu noqon doonaa kala duwanaan
Wareeg dhan oo xasilloon; isku dhafkan ayaa u muuqda wehel sax ah? Laakiin, isagu halkaas kuma iman jaanis, waxay qaataan qaddarin xaddidan oo daryeel ah.
Adhijirka reer Jarmal ee Rottweiler waa mid isku dhafan qoysaska badankood, iyada oo la siinayo khibrad ay leeyihiin eeyo waaweyn oo xoog badan.
Hubso inaad quudiso adhijirkaaga Jarmalka ah ee Rottweiler isku dar cunto tayo wanaagsan leh oo buuxiya baahiyadiisa nafaqada ee maalinlaha ah:
Ey ahaan, 22% cuntadiisa waa inay ahaadaan borotiin 8% waa inay baruur noqdaan.
Markuu si buuxda u bislaado, tani waxay yarayn doontaa 18% borotiin iyo 5% dufan.
Hubso inaad adigu akhri calaamada ku jirta cuntada xayawaanka la haysto si loo hubiyo inay leedahay xaddiga saxda ah ee borotiinka iyo dufanka oo aan aad ugu badnayn karbohaydraytyada.
Ey yar ahaan, koritaankooda degdegga ah iyo baahiyaha ay u qabaan quudinta badan awgeed, waxaad u badan tahay inaad quudin doonto 4 jeer maalintii - tani waa inaad iska ilaaliso in aad calooshiisa aad u kala bixiso.
Markuu weynaado, tani way yarayn doontaa, laakiin waxay haysaa ugu yaraan 2 jeer maalintii inta uu noolyahay.
Sababtoo ah isagu waa nooc weyn, wuxuu halis ugu jiraa buul. Waa halka caloosha gaasku buuxsamo kuna rogrogo. Badanaa waa loo dhintaa. Waxaa la soo jeediyay in cunnooyinka yar yar laakiin joogtada ah ay yareeyaan fursadaha koriimada.
Daqiiqado 60 - 120 daqiiqo
Labadaba waalidku inay noqdaan shaqaale taariikhi ah , waa wax la yaab leh in isku dhafkan ay ku badan yihiin tamarta.
Waxay jecel yihiin inay mashquul noqdaan waxaana lagula talinayaa inay jimicsi sameeyaan inta u dhexeysa 60 - 120 daqiiqo maalintii si ay u ilaaliyaan qaabkooda oo ay maskaxdooda u firfircoonaan.
Tababaridoodu waxay ka dhigan tahay taas xasuusintu badanaa way fududahay in la baro , laakiin, waxaad ka badbaadi lahayd inaad ku dhex socoto eeygaaga xadhig. Gobollada qaarkood iyo degmooyinku waxay leeyihiin xannibaadyo la xiriira Rottweilers, tanna waxaa ka mid noqon doona Isku-darka Rottie ee markaa hubi xaaladda sharci ee deegaankaaga.
Hubso inaad raacdo 5 daqiiqo oo qaanuun ah eey.
Ku hay ilaa 5 daqiiqo oo jimicsi ah bil kasta illaa iyo iska ilaali wixii dhaawac ah ee lafaha jimicsi xad dhaaf ah. Ka ilaali inuu jaranjarooyinka kor u kaco ama hoos ka boodo ama ka boodo kana baxo baabuurta ilaa uu si buuxda u qaan gaadhayo.
Sida dhallaanka oo dhan, iskudhafkan ayaa sida ugufiican uga jawaab celiya xoojinta wanaagsan iyo tababarka eyga ku saleysan abaalmarinta .
Waa inaad dhiirrigelisaa dabeecadda aad rabto inaad aragto, ku ammaano kuna abaalmariso alaabta lagu ciyaaro iyo fiiro gaar ah. Iska indha tir oo dib u hag dabeecad aan loo baahnayn. Hubso inaad adigu waligaa ha isticmaalin farsamooyinka ka leexashada sida aan ognahay kuwan runti waxay sababaan oo ay sii xumeeyaan dabeecadaha dhibaatada leh.
Hore u bilow, dhis xiriirka aad la leedahay eeyahaaga, oo u soo bandhig waxa adduunka laga helo. Labada waalidba waxay ahaayeen eeyo ilaaliya - eeygaagu wuxuu u baahan yahay inuu barto in tani aysan shaqadiisii ​​ahayn.
Markasta oo uu la kulmo indhaha iyo codadka adduunka, inbadan ayuu baran doonaa inay nabad yihiin oo aan laga taxaddarin.
In kasta oo fikradda ka dambeysa eeyo badan oo isku dhafan ay tahay in laga baxo arrimaha caafimaadka, isugeyntaas ayaa weli leh halista ah in laga dhaxlo mid ka mid ah xaaladaha caafimaad waalidkiis. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Hip iyo Elbow Dysplasia - oo ku badan noocyada waaweyn, halkan ayaa ah halka ay ka jirto horumarka aan caadiga ahayn ee sinta ama xusulka wadajir. Waxay ka dhalan kartaa daal, adkaansho iyo xanuun.
Bloat - xaalad kale oo caan ku ah noocyada waaweyn waa buro, badanaa loo yaqaan 'Gastric Torsion' .
Myelopathy oo xumaada - sidoo kale loo yaqaan CDRM , waa cudur horumar leh oo aan daawo lahayn oo lafdhabarta taasoo keenta luminta dhaqdhaqaaqa lugaha dambe.
Haddii aadan weli fahmin, Isku-darka Jarmalka Shepherd Rottweiler waa eey weyn. Cabirkoodu wuxuu ku xirnaan doonaa waalidkood, laakiin inta badan waxay u dhexeeyaan 75 illaa 115 lb waxayna u dhexeeyaan 22-27 ″ oo dherer ah.
Iyagu waa badan yihiin badanaa lagu arko madow iyo midabaynta tan, oo leh dhexdhexaad, jaakad cufan. Qaar baa lagu arkaa jaakado dhaadheer, haddii waalidka GSD uu lahaa jaakad dhaadheer .
Qofkasta oo hawlo madhan ku jira kuma mahadsan doono.
Eygan daadi, wax badan. Cadayashada joogtada ah waxay ku ilaalin doontaa jaakadiisa xaalad sare, 3-4 qubeys sanadkiiba noqon lahaa ku filan si uu isaga sii caraf udgoon. Ilkaha caday dhowr jeer usbuucii, si joogto ahna u hubi dhagihiisa. Ilaa iyo inta ay qurxinta socoto, iskudhafkani gaar ahaan ma ahan dayactir sare.
Markii si sax ah loo kiciyo, iskudhafka Jarmalka Shepherd Rottweiler waa isku dhaf adag oo xasilloon, xitaa isku dhafan.
Iyada oo labada waalidba ay yihiin ilaaliyeyaal taariikhi ah, waxaa laga yaabaa inaad ku dambaysaan xoogaa dabeecado ka fog ama laga yaabo inay feejignaadaan, laakiin, kuwani runti maahan wax milkiile xirfad leh iyo tababar hore iyo is dhexgalka bulshada oo aan wax laga qaban karin.
Isagu waa daacad iyo jacayl; si caqli badan oo tababaran.
Waxay ku baraaraan guryaha leh milkiileyaal khibrad leh waxayna si farxad leh kula noolaan doonaan carruurta da 'kasta leh, xitaa xayawaanka kale.
Tamar badan, waad ogaan doontaa haddii aadan la kulmin layliskiisa maalinlaha ah iyo kootada kicinta maskaxda! Laakiin, dhamaadka maalinta, markuu jiifo cagahaaga oo dhan, qalbigaagu ma rabi doono qof weyn oo geesinimo leh oo dabacsan. La wadaag faallooyinkaaga hoosta.
Ingiriis Sheepdog Ingiriis ah: Eeyga xiisaha leh ee xiisaha leh ma noqon karaa mid dagaal badan?
waa cagajugleyn Maraykan ah eyda qoyska wanaagsan
dibi godad u eg shabeel
jack Russell Terrier chihuahua eeyaha isku dhafka ah